Maitiro ekushandisa Twitter yakasviba modhi yeApple ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekumisikidza Twitter nzira yakasviba yeApple, Twitter iri pakupedzisira kuburitsa iyo maitiro erima usiku kwasviba yezviratidzo zve AMOLED pane Android, asi zvinogona kutora kubvambura kuti zvikwanise.
Twitter yakasviba modhi inouya kuApple
Twitter ye Android uye iOS yatobvumidza iwe otomatiki shandisa yakasviba modhi Zvichienderana nekuvira kwezuva, zvisinei, nema AMOLED ekuratidzira achiva akajairika, iyo Lights Out modhi yakatanga padandemutande uye paIOS kutanga kwegore rino. Nhasi, zvakawedzera iripo for Android.
Nepo kare marongero erima aive "Gadzirisa", Twitter ikozvino otomatiki inoshandura kuenda ku 'rima husiku' maitiro apo batidza rima modeNekudaro, iyi sarudzo haisati yasvika yakawanda yeiyo Zvishandiso zveAndroid kunyangwe mushure mekukwiridzira, asi nerombo rakanaka pane nzira yekumanikidza kushanda uku kushanda nemazvo.
Maitiro ekugonesa Lights Out paTwitter yeApple
Chekutanga pane zvese, iwe unoda ingangoita vhezheni 8.18.0 ye Twitter iyo irikusunungurwa parizvino kuburikidza neiyo Play Store, mushure meizvozvo uchafanirwa kumanikidza kumisa iyo app.
Mune mazhinji e Zvishandiso zveAndroid, ingoenda ku marongero uye sarudza Twitter mune runyorwa rwemaapplication akaiswa, ipapo ssarudza Simba kumisa.
Kubva pane imwechete menyu, iwe unofanirwa vhura iyo Chengetedzo uye Cache peji, wobva wasarudza Empty nzvimbo yekuchengetera kumanikidza Twitter kudzoka kumagadzirirwo asipo.
Panguva ino, vhura iyo app yeTwitter uye udzokere nekukasira kune iyo Zvirongwa app uye kumanikidza Twitter kumira kechipiri. Mushure meizvozvo, vhura Twitter zvakare uye anofanira kuva Mwenje Out inogoneswa.
Icho hunyengeri hwunoratidzika kunge hunoshanda pane akawanda madivayiri, asi kana zvikasadaro, usatombo kunetseka sezvo Twitter ichaburitsa chimiro zvakanyanya zvakanyanya mumazuva anotevera. Tizivisei mune zvakataurwa kana hunyengeri huchishanda pane yako Smartphone kana kwete.